QRbot: QR code reader and barcode reader 2.3.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.3.3 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား QRbot: QR code reader and barcode reader
QRbot: QR code reader and barcode reader ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါ QRbot QR ကုဒ်ကိုစာဖတ်သူနှင့်အတူ QR codes တွေကိုနှင့်ဘားကုဒ်များအမျိုးမျိုးတို့ကို scan လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ Scan ဖတ်မှသက်ဆိုင်ရာလျင်မြန်စွာလက်လှမ်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို: ဥပမာ, သင့်လိပ်စာစာအုပ်မှအဆက်အသွယ်ဒေတာကို add သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းကလစ်နဲ့ Wi-Fi ဟော့စပေါ့မှချိတ်ဆက်ပါ။ လွယ်ကူစွာတစ်ဦး QR ကုဒ်ကိုအဖြစ်သင့် screen ပေါ်မှာသူတို့ကိုပြသခြင်းနှင့်အခြားစက်ကိရိယာနှင့်သူတို့ကို scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်အဖြစ်မတရား data share ။
QR, ဒေတာများ Matrix, Aztec, UPC, Ean, Code ကို 39 အများအပြားကပို: အားလုံးဘုံဘားကုဒ်ကိုကို formats scan လုပ်ပါ။
ပွင့်လင်း URLs များကို, etc, ထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေ, vCard ဖတ်ပါ, ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်များ add, Wi-Fi ဟော့စပေါ့ကိုချိတ်ဆက်
ကို Google လုံခြုံစွာ Browsing သို့တိုတောင်းတင်ကြိမ်ကနေ သည်နည်းပညာနှင့်အမြတ်အစွန်း featuring အ Chrome ကိုစိတ်တိုင်းကျတဲပ်များ သည်နှင့်အတူအန္တရာယ်ရှိတဲ့လင့်များကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါ။
သင့်ရဲ့ device ကိုသိုလှောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းမရှိဘဲပုံတစ်ပုံကို scan လုပ်ပါ။ တောင်မှသင့်ရဲ့လိပ်စာစာအုပ်ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းမရှိဘဲ QR ကုဒ်ကိုအဖြစ်အဆက်အသွယ် data share!
ရုပ်ပုံဖိုင်တွေအတွင်း codes တွေကို detect သို့မဟုတ်ကင်မရာ အသုံးပြု. တိုက်ရိုက် scan ။
မှောင်မိုက် enviroments မှာယုံကြည်စိတ်ချရသော Scan ဖတ်ဘို့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုသက်ဝင်နှင့်ပင်ဝေးကွာသောအကွာအဝေးကနေဘားကုဒ်များဖတ်ရှုဖို့အဖြစ်တော့-to-zoom ကိုအသုံးပြုပါ။
ထိုကဲ့သို့သော QR ကုဒ်ကိုအဖြစ်သင့် screen ပေါ်မှာသူတို့ကိုပြသခြင်းနှင့်အခြားစက်ကိရိယာနှင့်သူတို့ကို scan ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် built-in QR ကုဒ်ကိုမီးစက်နှင့်အတူက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်အဖြစ်ဝေမျှမယ်မတရားဒေတာ။
Custom Search ရွေးချယ်စရာများ
အဆိုပါဘားကုဒ်ကိုရှာဖှေ (ဆိုလိုသင်အကြိုက်ဆုံးစျေးဝယ်က်ဘ်ဆိုက်) သို့ထုံးစံဝက်ဘ်ဆိုက်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်တိကျသောအချက်အလက်များရယူပါ။
CSV ကို Export and Annotation
န့်အသတ်သမိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲနှင့် (CSV ဖိုင်အဖြစ်) ကတင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။ သည် Excel ကို ကိုကတင်သွင်းသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော ကို Google Drive ကို သည်အဖြစ်မဆို cloud storage ကသိမ်းဆည်းပါ။ သင့်ရဲ့ Scan ဖတ်မှတ်စာရေးသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းစီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ်သင့်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အရည်အသွေးကိုအာမခံချက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်!
အန်းဒရွိုက် 6.0 သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပြေးစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များအတွက်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံး QR ကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကို apps များထဲကတစ်ခုခံစားပါ။
ထောကျပံ့ဖို့အတွက် QR codes တွေကို:
•အဆက်အသွယ်ဒေတာ (MeCard, လိပ်စာကဒ်, vcf)
• Wi-Fi ဟော့စပေါ့ access ကိုသတင်းအချက်အလက်
•အီးမေးလ်, SMS နှင့် MATMSG
ဘားကုဒ်များနှင့် Two-ရှုထောင် codes တွေကို:
•ဆောင်းပါးနံပါတ်များကို (Ean, UPC, Jan, GTIN, ISBN)
• Codabar သို့မဟုတ် Codeabar
• Code ကို 39 Code ကို 93 နဲ့ Code ကို 128
•5ကြားညှပ်2(ITF)
• Aztec Code ကို
•မှာ Data Matrix
QRbot: QR code reader and barcode reader အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
QRbot: QR code reader and barcode reader အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
QRbot: QR code reader and barcode reader အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
QRbot: QR code reader and barcode reader အား အခ်က္ျပပါ
QRbot: QR code reader and barcode reader ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း QRbot: QR code reader and barcode reader အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://qrbotandroid.firebaseapp.com/privacy.html
App Name: QRbot: QR code reader and barcode reader
Release date: 2019-09-08 08:27:50
လက်မှတ် SHA1: 17:8C:13:B8:4D:35:3D:42:B4:34:88:75:BB:DF:3A:47:81:A3:4C:0D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Markus W?rz
အဖွဲ့အစည်း (O): TeaCapps GmbH
နယ်မြေ (L): Obersulm
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): BW
QRbot: QR code reader and barcode reader APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ